Airtel – Orange – Telma: tolotra sms amin’ny sarany mitovy | NewsMada
Airtel – Orange – Telma: tolotra sms amin’ny sarany mitovy
Par Taratra sur 03/04/2020
Fotoana iarahan’ny rehetra mientana izao, manoloana ny valanaretina Coronavirus. Anisan’ireny ny Airtel, ny Orange, ny Telma miara-miasa amin’ny minisiteran’ny Paositra, ny fifandraisan-davitra, ary ny haitao ara-kajy mirindra (MPTDN)*.
Marina fa mpifaninana henjana eo amin’ny varotra ireo mpisehara amin’ny fifandraisan-davitra amin’izao fivoa­ran’ny teknolojia izao, saingy miray feo izy ireo manolotra tolotra iraisana sy tokana amin’ny sarany mitovy ho an’ny vahoaka malagasy.
Amin’ny ankapobeny, lafo ny saran’ny fandefasana sms, indrindra raha samy hafa ireo tambajotra ampiasan’ny mpandefa sy mpandray. Manodidina ny 120 Ar izany sarany izany. Amin’ity tetikasa vaovao ity, mihena hatramin’ny 10 Ar izy io. Izany hoe, ity tolotra vaovao ity amin’ny sarany 1000 ariary, ahafahana mandefa sms 100 amin’ny tambajotra rehetra misy, ary manan-kery 30 andro.
Tanjona nametrahan’ny minisitera misahana ny fifandraisan-davitra (MPTDN) ny hanamoràna ny fi­fampitam-baovao eo amin’ireo samy mpianakavy sy mpiara-miasa, sns, indrindra amin’izao vanim-potoana fihibohana izao. Tsara marihina fa mitohy hatrany io tolotra io na tapitra aza ny ady amin’ny Covid-19. Tsy manakana na koa manembantsembana ireo tolotra hafa, toy ny “Be Connect”, “First”, “Antso Milay” …ity tolotra iraisana ity. Nafainganin’ny MPTDN ny fampandehanana ity tolotra ity ho tombontsoan’ny Malagasy rehetra.
Afaka mampiasa azy ireo manana finday rehetra manerana ny Nosy. Tsy afaka mampiasa izany kosa ireo orinasa mampiasa « postpayés ».
Code hidirana amin’ny tolotra sms iraisana :
– AIRTEL : *100*2#
– Orange : 224*30*0
– Telma : #322*66#